I-Linux 5.10.1 ifika emahoreni angama-24 ngemuva kokukhishwa kwangaphambilini | Kusuka kuLinux
I-Linux 5.10.1 ifika emahoreni angama-24 ngemuva kokukhishwa kwangaphambilini
ILinus Torvalds imemezele ukutholakala kweLinux 5.10 ezinsukwini ezimbalwa ezedlule (Disemba 13, 2020), inguqulo eletha izici eziningi ezintsha, ukuthuthuka, amashayeli amasha nezishayeli ezibuyekeziwe zokusekelwa okungcono kwehadiwe. Futhi ngemuva kwamasonto ayisikhombisa wentuthuko, iLinux 5.10 ekugcineni isilapha njengenguqulo yakamuva ye-kernel yokusatshalaliswa kwe-GNU / Linux efuna ukwesekwa kwezinga lokuqala le-hardware. Futhi, igatsha elisekelwa isikhathi eside (i-LTS), okusho ukuthi kungenzeka lithole ukwesekwa eminyakeni emi-5 ezayo.
Ngemuva kwalokhu kukhishwa Kuthathe amahora angama-24 kuphela ukuthi kukhishwe isibuyekezo sokulungisa i- "Linux 5.10.1". Njengokukhishwa kwephoyinti lokuqala bekungeke kufike izinsuku ezimbalwa noma amasonto ambalwa ngemuva kokukhishwa kweLinux 5.10. Kodwa-ke, kulokhu kwenzeka ngemuva kosuku.
Linux 5.10.1 inokulungiswa okubili kuphela, kokubili okuthinta ikhodi yokugcina. Kukhona ukubuyela emuva kusixazululo esedlule ezungeze imingcele ye-DISCARD RAID i-RAID1 ne-RAID10 kukhodi yemephu yedivayisi.
Ukuzibophezela kumane kusho
"Lokhu kudala izinkinga ezibuhlungu."
Okunye kulungisa ukuguquguquka komkhakha we-MD code block kusuka ku-unsigned int kuya ku-int elula, futhi ngezizathu zokuthi "lokhu kudala izinkinga." Ushintsho lwakamuva lwekhodi ye-MD luqede ukuphazamisa ukufakwa kokucushwa okungenani kwe-RAID6 ku-Linux 5.10 futhi kwabonwa ngokushesha ngonjiniyela bangaphambilini lapho bashintshela enguqulweni yokugcina ye-kernel.
Izinkinga zibucayi ngokwanele (ikakhulukazi lapho izimbungulu zithinta ikhodi ye-kernel ehlobene nokugcina) futhi ngaleyo ndlela kwaholela ekukhishweni kweLinux 5.10.1.
Ngakho-ke, iLinux 5.10.1 iyatholakala futhi abasebenzisi bayakhuthazwa ukuthi bathuthukise uma bengekho kulolu chungechunge lwakamuva lwe-LTS.
Mayelana ne- Amaphuzu avelele egatsha elisha le-LTS afaka ukusekelwa kwesandiso sokumaka imemori ye-ARMv8.5, ukusekelwa kwe-SM2 digital signature algorithm, ukuxhaswa kwe-CAN ISO 15765 2: 2016 protocol protocol, ukusekelwa kwe-IGMPv3 / MLDv2 protocol multicast, nokusekelwa kwama-Amazon Nitro enclaves. Uhlelo lwefayela le-EXT4 manje luza nemodi "yokuzibophezela okusheshayo" eyehlisa kakhulu ukubambezeleka kokusebenza kwamafayela amaningi, uhlelo lwefayela le-ZoneFS lunenketho entsha yokukhweza ebizwa nge-clear open, nohlelo lwefayela le-OverlayFS manje selungaziziba zonke izinhlobo ze-defsync.
Iphinde yethule i- ikhono lokwakhiwa kwe-MIPS ukuqala izinhlamvu ezicindezelwe ze-Zstd (ZStandard), ikhono lokudlulisa idatha ngemifudlana eminingi ngasikhathi sinye, nokusekela i-hypervisor I-KVM isho inqubo ye-LTS 'isikhala somsebenzisi sokuphatha ukufinyelela kuma-MSR angaziwa (imodeli amarekhodi athile).
Futhi, uhlelo lwefayela Ama-Btrf athole ukwenziwa ngcono kokusebenza kwemisebenzi ye-fsync (), futhi kunesici esisha se-SEV-ES esandisa i-AMD's Secure Encrypted Virtualization (SEV) ukuze ibethele namarejista weprosesa yezivakashi ukuze angatholwa ngumgcini ngaphandle kwesihambeli esabelana ngokusobala ngaso.
Phakathi kwezinye izinguquko eziphawulekayo, i-subsystem_uring ithole ukwesekwa kokwenza amasongo avinjelwe, uhlelo lwe-pidfd_open () luthole ukwesekwa ngokwakha izincazelo zefayela ezingavimbi. Ukwakhiwa kwe-RISC-V nakho sekuthuthukisiwe futhi manje kungenzeka ukuqala ngamasistimu e-EFI.
Futhi, Akufanele sikhohlwe ukusethwa kwesitembu sesikhathi i-XFS kunweba isikhathi sezinhlelo ze-UNIX okweminyaka embalwa.
Leli thimba lisacubungula ezinye izindlela zokuxazulula inkinga yonyaka ka-2038, okumele ibuyise izinhlelo ze-Unix zibuyele emuva ngonyaka we-1901. Ukwenza lokhu, uDarrick J. Wong, ongumlondolozi wohlelo lwefayela le-XFS, wethule ukulungiswa kweXFS yeLinux 5.10 okulindeleke ukuthi ibambezele ukukhishwa kwe-XFS yowama-2038 ngeminye iminyaka engama-448. Lokhu kufanele kube ngokwanele ukuthola isisombululo sangempela sesikhathi eside.
Kususelwa ku-kernel version 5.6, ekhishwe ngoMashi owedlule, lapho iqembu laqala khona ukuphakamisa ukulungiswa ukuze kuxazululwe inkinga yonyaka ka-2038. Leli yiphutha lakudala ekubhaleni ngesikhathi kuzinhlelo ezifanayo. ku-Unix, kufaka phakathi i-Linux, i-MacOS, nezinye izinhlelo zokusebenza ezihambelana ne-POSIX. Kulezi zinhlelo, isikhathi sokubala sisuselwa kumasekhondi adlulile kusukela ngoJanuwari 1, 1970 ngo-00: 00: 00 UTC (ebizwa nangokuthi i-Epoch). Usuku luzonikeza, ngokwesibonelo, imizuzwana engama-86.400 nonyaka amasekhondi angama-31.536.000.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » I-Linux 5.10.1 ifika emahoreni angama-24 ngemuva kokukhishwa kwangaphambilini
Saqeda. manje ngizochaza izinkinga engibe nazo ohlelweni neManjaro, lapho iGrub nayo iqale ukwahlukanisa ne-LMDE-4. Lapho sekuqalisiwe, zombili lezi zinhlelo zaqandeka futhi kwadingeka zisethwe kabusha ngabanesibindi. Okokuqala kwenzeke kimi ku-LMDE ngaphandle kokuvuselela iManjaro, futhi ngemuva kokubuyekeza lokhu kwenzeka nakuye.
Bengivele ngicabanga ukuthi yi-kernel, kepha ngibe nobunzima obukhulu bokwenza uhlelo olukhulu lusebenze ngemuva kokulufaka kabusha ngaphandle kokuluvuselela. Ngisho nokwehlisa ukufakwa koqobo (?).
Ngalesi sikhathi ngithathe indawo yohlelo olukhulu ngohlobo lweSylvia lweLinux Mint ngicabanga ukuthi ngizofaka i-kernel endala. Ngizobuyisa iManjaro yami ehloniphekile ehlala isebenza ngokuhloniphekile ezinhlelweni engizifakile kuzo.
Ngiyabonga kakhulu ngolwazi.
I-CentOS, ezinye izindlela okufanele uzicabangele